तिथि मेरो पत्रु » सेक्स तपाईं राम्रो जीवन बिताउन मदत गर्न सक्नुहुन्छ
सेक्स तपाईं राम्रो जीवन बिताउन मदत गर्न सक्नुहुन्छ
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जनवरी. 16 2021 |2मिनेट पढ्न
हामी सबै महसुस गर्न सक्छन् बस कसरी राम्रो सेक्स थाह तर तपाईं सेक्स तपाईं लागि वास्तवमा स्वस्थ छ भनेर थाह गरे?
सेक्स ठीक काम आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणाली राख्न मदत गर्छ. लगातार सेक्स गर्ने मान्छे वास्तवमा जीवाणुहरू विरुद्ध आफ्नो शरीर रक्षा कि एंटीबडी को उच्च स्तर छ, भाइरस, र अन्य घुसपैठियों. निस्सन्देह, यो पनि तपाईं सक्रिय रहन सिफारिस गरिएको छ, स्वस्थ खाने, र आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणाली खुसी रहन्छ भन्ने निश्चित गर्न पर्याप्त निद्रा प्राप्त.
सेक्स कामेच्छा क्षमता बढ्दछ. यौन सम्बन्ध राख्नु मात्र यो अझ राम्रो बनाउन छैन तर आफ्नो कामेच्छा सुधार हुनेछ. महिलाहरु को लागि, भएको सेक्स योनी स्नेहन बढ्छ, रगत प्रवाह, र लोच, अझ तीव्र लालसा सिर्जना गर्दा सबै बनाउन सेक्स राम्रो महसुस.
सेक्स रक्तचाप कम गर्छ. सेक्स र कम रक्तचाप बीच एक कडी छ कि थाहा हुन्छ कि अनुसन्धान छ. सेक्स पनि आफ्नो हृदयघात जोखिम कम गर्छ. आफ्नो हृदय दर माथि राख्न एक उत्कृष्ट तरिका हुनुको अलावा, सेक्स पनि सन्तुलित मा एस्ट्रोजन र टेस्टोस्टेरोन स्तर पालन मदत गर्छ.
सेक्स व्यायाम रूपमा भाँचिदिन्छ. यो आफ्नो विशिष्ट कार्डियो कसरत ठाँउ छैन गर्दा, यो निश्चित रूप मदत गर्छ. सामान्यतया, सेक्स विभिन्न मांसपेशीहरू आफ्नो हृदय दर माथि bumping र प्रयोग गर्न वाहेक प्रति मिनेट करिब पाँच क्यालोरी बल्छ.
दुखाइ कम गर्न सक्छन् सेक्स. तपाईं एक माइग्रेन वा दुखाइ लड्दै होस्, बरु एस्पिरिन कब्जाने को, एक संभोग प्रयास. एक संभोग समयमा, एक हर्मोन आफ्नो पीडा सहिष्णुता खडा मदत जारी छ. एक संभोग दुखाइ कम गर्न सक्छन् बिना समेत उत्तेजना.
प्रोस्टेट क्यान्सर मा पुरुष संभावना कम हुन सक्छ सेक्स. अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को जर्नल गरेको हालै अध्ययन पुरुषहरूले प्रायः ejaculated गर्ने कि यसो भन्छ (कम से कम 21 पटक एक महिना) प्रोस्टेट क्यान्सर प्राप्त हुने सम्भावना कम हुन्छ.
सेक्स निद्रामा सुधार. मान्छे सेक्स पछि सो चाँडै गिर गर्छन, विशेष गरी संलग्न एक संभोग त्यहाँ छ. एक संभोग पछि, एक हर्मोन प्रोलैक्टिन सुस्ती र विश्राम को भावना को लागि अनुकूल छ जो जारी छ.
अन्त, सेक्स तनाव कम गर्न मदत गर्छ. नजिक हुनु, शारीरिक र भावनात्मक, आफ्नो साथी पीडा कम गर्न सक्छन्, दुःखको, र तल्लो चिन्ता. मन छुने खालका र स्यावालागी एक प्राकृतिक जारी गर्न सक्छन् “महसुस-राम्रो हर्मोन” यौन इच्छा एक मस्तिष्क रासायनिक जारी गरेर आफ्नो खुशी र इनाम प्रणाली Amps जबकि. सेक्स र शारीरिक र भावनात्मक सम्बन्धले पनि आत्म-सम्मान र आनन्द बढावा गर्न सक्छन्.
तपाईं देख्न सक्छौं, सेक्स मात्र पनि सुखी जीवन तर एउटा स्वस्थ गर्न नेतृत्व छैन.
अनलाइन डेटिङ सफलता लागि तीन सुझाव
3 तपाईं उहाँलाई प्रतिबद्धता चाहनुहुन्छ भने तपाईंले बुझेको हुनुपर्छ कुराहरू